Olon-tsotra Mpampita Vaovao Nisy Naka An-Keriny sy Namono tao Meksika Fa Nitatitra Fikambanan-Jiolahy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2014 21:17 GMT
Vakio amin'ny teny English, čeština , Español, Aymara, македонски, bahasa Indonesia, Français, 日本語, polski, English
Saripika avy amin'ny kaonty Google Plus Valor por Tamaulipas. “Hatanjaka izahay ho anao. Ho fahatsiarovana an'i: María del Rosario Fuentes Rubio, 15-16 Oktobra 2014 ao Reynosa. Nisy naka an-keriny tamin'ny 15 Oktobra tao amin'ny vaki-paritr'i Reynosa. Rosario dia dokotera nanoka-tena ho amin'ny fampafantarana amin'ny fokonolona ny loza [mety hitranga], manana fo lehibe tahaka ny herim-pony, ry Miut3 anay.”
Nitatitra omaly ny vondron'olon-tsotra tao amin'ny fanjakan'i Tamaulipas fa nisy naka an-keriny sy namono ho faty ny mpisera Twitter María del Rosario Fuentes Rubio. Na dia tsy fantatra aza ny tompon'antoka tamin'ny fahafatesany, dia nipoitra tao amin'ny randram-baovaon'ny Twitter-ny ny vatana mangatsiakan'i Fuentes Rubio.
Naato taoriana kelin'izany ny kaonty Twitter-ny ​@Miut3​. Taorian'ny lazaina fa fangataha-pamelàna nataon'i María del Rosario noho ny nifanandrinany tamin'ireo lehiben'ny fanaovana trafikan-drongony, dia nivoaka ny sarin'ny famonoana azy, sy ny hafatra navelany taorian'ny fahafatesany nampitandrina ireo olon-tsotra hafa tia mampita vaovao mba hangina manoloana ny herisetra ao Reyonsa satria “tsy hahazo na inona na inona avy amin'izany ianareo.”
Dokotera mpitsabo tao Reynosa​ i Fuentes Rubio izay nanolo-tena ho mpandray anjara tao amin'ny Valor por Tamaulipas (Herimpo ho an'i Tamaulipas), seha-pampitam-baovao mamela ny mpisera hanoratra tatitra, tsy mitonona anarana, ny herisetra, indrindra fa ireo tranga mifandraika amin'ny fikambanan-jiolahy sy ny aferan-drongony. Nanao raharaha amin'ny maha-mpitantana ny Responsabilidad por Tamaulipas (Fandraisana andraikitra ho an'i Tamaulipas), tetikasa sahalahala amin'ny voatonona voalohany teo ihany koa izy. Ny hafatra farany voasoratra ao amin'ny “Valor for Tamaulipas” dia manazavazava azy ho “anjely iray nanome ny zavatra rehetra, ny ainy, ny hoaviny, ny filaminany sy ny fitoniany (…) ho fanasoavana ny vahoaka ao amin'ny fanjakana.”​
Tsy sambany tsy akory ny olona mivondrona ao anatin'itony tambajotra itony no saziana noho ny tatitra nataony. Hatramin'ny nijoroany tamin'ny 2012, dia niatrika onjam-pandrahonana sy trangan-kerisetra izay nanery ny mpitantana hampiato ny asa fanaony ny Valor por Tamaulipas.
Nampiasa ny media sosialy ny Valor por Tamaulipas hampandraisana anjara ny olona hitondra tatitra ao amin'ny fanjakan'i Tamaulipas, izay lavadavaky ny fifandonana mifandraika amin'ny raharahan-drongony sy ny kolikoly hatramin'ny 2006. Tamin'ny Febroary 2013, nisy fikambanana mpanao raharahan-drongony tsy voafaritra hoe iza nampiely taratasy manolotra MX$600.000 (tokotokony ho US$44.000) ho an'ireo izay manome torohay mombamomba ireo mpitantana ny kaonty media sosialin'ny Valor por Tamaulipas. Fotoana fohy taorian'izany ny @ValorTamaulipas no nanambara fikasana hampiato ny fitaterana (fitoriana). Saingy nanao tampody fohy nihanatanjaka indray ny tambajotra taorian'izany — nitohy ny hersitra mamely an'i Tamaulipas ary manohy mitatitra izany ny olom-pirenena.​​
Nahatery ny vondron'orinasam-pampitam-baovao mahazatra hampihena fitantarana ny herisetran'ny raharahan-drongony ny fifandonana; nanombana ny Komity Mpiaro ny Mpanao gazety fa mpanao gazety 16 no maty nisy namono tao Meksika hatramin'ny 2006, ary ny ankamaroany dia noho ny fitantarana nataon-dry zareo mifandraika amin'ny raharahan-drongony sy ny kolikoly. ​Hoy i Darío Ramírez, tale jeneralin'ny Article 19 ao Meksika sy Amerika Afovoany: “Niteraka fahabangana ara-torohay amin'ny lohahevitra mifandraika amin'ny filaminam-bahoaka ny herisetra mianjady amin'ny gazety ao Tamaulipas sy ny tsy fisian'ny fiarovana ny fahalalaham-pitenenana avy amin'ny manampahefana meksikana, ka lasa fitaovana mahomby ampiasain'olon-tsotra hahazo vaovao maimaim-poana amin'ireny tranga ireny ny tambajotra sosialy.”​
Koa satria moa lasa mameno ny banga amin'ny fitateram-baovao amin'ny zavatra tahaka itony ny olom-pirenena sy ny mpiserasera media sosialy mitatitra izay henony sy hitany eny an-kianja, dia lasa lasibatry ny fikambanana mpanao raharahan-drongony ny vondrona tahaka ny VxT sy ny olon-tsotra tahaka an'i Fuentes Rubio.